Elizabeth Elizabethson Sr. - I-Salem Witch Trials Umfanekiso
Uvavanyo lwezentengiso ze-Salem: Utyholwa ngumlingo, uMama, udade kunye noMninci woTyholwa
Eyaziwa ngokuba: ummangalelwa ngumlumbi kwizilingo ezingama -1692 Salem
Umsebenzi: "umhlobokazi" - umenzi wendlu
Ubudala ngexesha lovavanyo lwamaqhinga eSalem: malunga ne-50
Imihla: malunga ne-1642-Epreli 15, 1722
Yaziwa nangokuthi: u- Elizabeth Dane Johnson, uDane uphinde wachaze uMlawuli okanye uDeane
UBawo: uMfundisi Francis Dane (1615 - 1697)
Umama: u-Elizabeth Ingalls
U-Albert Dane (1636 - 1642), uMary Clark Dane Chandler (1638 - 1679, abantwana abali-7, abahlanu bahlala ngo-1692), uFrancis Dane (1642 - ngaphambi kwe-1656), uNathanel Dane (1645 - U-Albert Dane (1645 -?), UHane Dane Goodhue (1648 - 1712), uPhebe Dane Robinson (1650 - 1726), uAbhigayil Dane Faulkner (1652 - 1730)
Umyeni: uStephen Johnson (1640 ukuya ku-1690), owaziwa ngokuba nguNgumzekelo. Ukufa kwakhe kwamshiye umama ongatshatanga.
Abantwana (ngokwemiqathango eyahlukeneyo):
U-Elizabeth (1662 - 1669)
UFrancis (1667 - 1738), watshata noSara Hawkes (1655 - 1698), uHan Clarke
U-Elizabeth Jr ((1670 - malunga ne-1732)
UStephen Johnson (1672 - 1672)
UBenjohn Johnson (1677 - emva kwe-1726), watshata noSara Foster (1677 - 1760)
UStephen Johnson (1679 - 1769), watshata noSara Whittaker (1687 - 1716), uRuth Eaton (1684 - 1750)
UAbhigayil Johnson (1681 - 1720), watshata noJames Black (1669 - 1722)
U-Elizabeth Johnson Sr. Ngaphambi kovavanyo lwe-Salem Witch Trials
Ezinye imithombo ibhekisela kwingxaki ngaphambi kwe-1692, nokuba yintlawulo yobugqirha okanye ubuhenyu. Ubume bakhe njengomama ongatshatanga, umhlolokazi ongatshatanga, bekungayenza ibe yinto elula yokumangalela, mhlawumbi. Kwakhona, ezine ukuya kweyesithandathu (iirekhodi azihambelani) zabantwana bakhe bafile besesebuntwaneni, oko kunokubakhokelela abanye ukuba bakrokre ukwenza okubi.
Uyise, uMfundisi uFrancis Dane, wayaziwa ngokuba nokungathemba ngobugqwirha, kwaye ekuqaleni kweemeko ze-1692 zathi ukungaqiniseki. Oku kunokubangela ukuba amalungu omndeni wakhe ajoliswe kuwo.
U-Elizabeth Johnson Sr. kunye novavanyo lwe-Salem Witch
Ngomhla kaJanuwari 12, idiphozithi kaMercy Lewis ichaza ngo-Elizabeth Johnson ngokumangalelwa kobugqwirha.
Akuqinisekanga ukuba lo ngumama okanye intombi, okanye omnye umntu. Akukho nto yavela kuloo nkcazo.
Kodwa ngo-Agasti 10, u-Elizabeth's nameake intombi yabanjwa waza wahlolwa. Wavuma ukusebenzisana neGoody Carrier kwaye wathi wayebone uGeorge Burroughs kwi-"Sacred Order" noMarta Toothaker noDaniel Eames ngesinye isikhathi. Wayevuma ukuba wayemkhathaza uSarah Phelps, uMary Wolcott, uAnner Putnam nabanye abaninzi.
Ngomso waqhubeka nokuvuma kwakhe. Uthe akazange abone uMarthar Carrier noMarta Toothaker kuphela kodwa abantwana bakaToothaker ababini. Wachaza indlela awayezisebenzisa ngayo iimpopethi zokuxhatshaza.
Ngaloo mini, udade omncinci uElizabeth Johnson Sr., uAbhigayil Faulkner Sr., wabanjwa, watshutshiswa ngabamelwane abambalwa. Uhlolwe nguJonathan Corwin, uJohn Hathorne noJohn Higginson. Abagxeki baquka u-Ann Putnam, uMary Warren noWilliam Barker, uSr. Sarah Carrier, oneminyaka engama-7 kunye nentombi kaMarta Carrier (owagwetywa ngo-Agasti 5) noTomas Carrier, bavavanywa.
U-Elizabeth Johnson Sr. Wabanjwa waza wahlolwa
Igunya lokubanjwa lakhishwa ngo-Elizabeth Johnson Sr. kunye nentombi yakhe u-Abigail Johnson (11) ngo-Agasti 29, ebagxeka ngokubethekisa uMarta Sprague wase-Boxford no-Abigail uMartin we-Andover.
UStephen Johnson (14) unokubanjelwa ngeli xesha okanye ngomso ozayo.
Oodade bobabini, uAbhigayil Faulkner Sr. no-Elizabeth Johnson Sr., bavalelwa enkundleni ngosuku olulandelayo. Bobabini bavuma. U-Elizabeth wathi udadewabo, naye enkundleni ngelo xesha, wayesongela ukuba amqhekeze xa evuma. Wayemangalela abanye abantu, kuquka ukuba wayeyika ukuba unyana wakhe uStefano wayebuqili. Wavuma ukuba asayine incwadi kaDeveli .
URebecca Eames uphinde wahlolisiswa kwaye wabandakanywa amaninzi kubandakanya uAbhigayili Faulkner, kwaye waphinda wachaza amacala ngo-Agasti 31.
NgoSeptemba 1, unyana oneminyaka eli-14 ka-Elizabeth, uStefano, wahlolwa; Wavuma, esithi wayebuhlungu uMarta Sprague, uMary Lacy noRose Foster.
Iqela labesetyhini e-Andover labanjelwa ndawonye emva kwamantombazana amaninzi athathwe eSalm Village ahamba apho ukuze "ahlolisise" ukugula.
Ukukhululwa uDane, umfazi ka-Elizabeth, umntakwabo uElizabheli, wayephakathi kwabo. Wavuma phantsi kokuvavanya. Uthe wayesebenza noMnu. Osgood. Wayebandakanya umkhwe wakhe, uyise kaElizabeth u-Rev. Francis Dane, kodwa akazange abanjwe. Uninzi lweengxelo zokubanjwa kunye neemviwo zilahlekile. Ukunyanzeliswa ukuba bavume, aba bafazi babandakanyeka, kwaye kamva babesaba ukulahla ukuvuma kwabo xa bebona ukuba uSamuel Wardwell ugwetyelwe kwaye wabulawa xa elahlekile.
NgoSeptemba 17, uSamuel Wardwell noAbhigayil Faulkner babephakathi kwalabo batyholwa kwaye bagwetywa ukuxhoma. UAbhigayili ukukhulelwa kukaFaulkner kwakuthetha ukuba isivakalisi asinakwenziwa kuze kube yilapho esisindisayo, ngoko wabalekela.
Elizabeth Elizabethson Sr. Emva kovavanyo
Iirekhodi azicacanga ngoxa u-Elizabeth Johnson Sr. wakhululwa entolongweni kwaye phantsi kweemeko ziphi.
Ngo-Oktobha, umntakwabo u-Elizabeth u-Nathaniel Dane kunye nommelwane, uJohn Osgood, wathembisa ama-pounds angama-500 waza wafumana uDorothy Faulkner no-Abigail Faulkner Jr. Ngaloo mini, abantwana bakaElizabethe, u-Stephen Johnson no-Abigail Johnson, kunye nommelwane uSara Carrier bakhululwa ngokuhlawula ama-pounds angama-500, ukuba banakekelwe nguWalter Wright (weaver), uFrancis Johnson noTomas Carrier.
NgoDisemba, udadewabo ka-Elizabheli u-Abigail Faulkner wakhululwa emva kokuncenga irhuluneli.
NgoJanuwari, iNkundla ePhakamileyo yadibana nokuhlambulula amaninzi amatyala awashiywanga. Elizabeth Johnson Jr.
wayephakathi kwabo bazama; wafunyanwa engenetyala ngoJanuwari 3.
Kubantwana bakhe abathathu abasolwa ngabo: u-Elizabeth Johnson Jr, sele sele esatshatile ngexesha leemvavanyo, wahlala kwada kwa-1732. UStephen watshata noRute Eaton ngo-1716, waza wahlala ngo-1769. UAbhigayil Johnson, umntwana omncinane, watshata ngo-1703, kwaye wayenabantwana abathandathu nomyeni wakhe uJames Black, omncinci ozelwe ngowama-1718; UAbhigali wasweleka ngo-1720.
Iirekhodi zomntu zibonisa ukuba u-Elizabeth Dane Johnson waphila kwada kwa-1722.
U-Elizabeth Johnson Jr. wayengumhlolokazi, okwenza ukuba kube lula. Wayekade eneengxaki ezithile - imithombo eyahlukileyo nokuba ingahlawuliswa nohenyuzo okanye uloyiko, ngoko ke wayenokuba nedumela.
Elizabeth Johnson Sr. kwiCrucible
U-Elizabeth Dane Johnson kunye nabo bonke abase-Andover Dane abongezelelekileyo intsapho abayintsimi edlalwa ngu-Arthur Miller malunga novavanyo lwe-Salem, iCrucible.
Elizabeth Johnson Sr. e Salem, ngo- 2014 uchungechunge
U-Elizabeth kunye nabo bonke abase-Andover uDane banwetsapho entsapho abayintsimi kwi-series ye- Salem TV.
Enheduanna, umPristikazi we-Inanna
Imfazwe Yehlabathi II: I-Admiral Sir Bertram Ramsay
Quotes eRachel Carson
Ngaba Inyoka Enkulu Kwatholakala Ngokwenene ELwandle Olubomvu?
Funda amaninzi amaVotes okuNyulo
'Isibhedlele Esiqhelekileyo' Umntu uElizabeth Webber Spencer
I-Devils Tower: I-Wyoming Famous Landmark
Inkqubo yeBhedlele yase-Indian isifo, i-Watchdog Ithola
Imfazwe Yehlabathi I: Sopwith Camel
Corpus Callosum kunye neBrain Function